Ny androaniko | Ngonongonona
[Ngonongonona ] 18 Martsa, 2018 18:49
'Aleo ihany tsy mpino, toa izay katolika mihatsaravelatsihy' : tsia, tsy tenin'ny Papa Ray Masina io.
Tsy resa-pinoana fa resa-panahy no fototr'ity toraka blaogiko androany ity. Ilay fanahy tsara na fanahy ratsy mamaritra ny toetran'ny olombelona tsirairay. Tsy misy ny tapitr'ohatra amin'ny hatsarana kanefa koa dia misy ny hiringiriny amin'ny haratsiam-panahy. Samy manana ny isehoany ireo, samy manana ny fahaizany mamoaka na manafina azy. Misy ny tsara fanahy tsy mipoerapoera mihitsy fa izay ataony am-panetren-tena no hahitana taratra izany. Misy ny kary manafin-koho ka mahavaky vava indraindray. Dia misy koa anefa ny tena tsy tahotra tsy henatra mihitsy fa mivandravandra toa vay an-kandrina ny haratsian-toetrany. Raha atao aza ny kajy dia aleo lavitra ireny olona ireny, efa hay ny toetrany dia anjaranao ny manaraka na tsia ny ataony.
Fa ny idiran'ny resa-pinoana eto dia satria maro ireo kivy amin'ireo saka manafin-koho ka nijapy ny resak'i Papa François indray andro. Nolazaina manko fa tenin'i Papa ny hoe "aleo ihany tsy mpino toa izay katolika mihatsaravelatsihy" ary nety tamin'ny ankamaroantsika ilay izy satria betsaka tokoa ny mitanisa ny tenin'ny Soratra Masina hampirantiana ny atao fotsiny fa tsy mampihatra izany amin'ny fiainana sy ny fiaraha-monina. Sarotra be ny mampihatra ny fanetren-tena, ny fitiavana ny hafa, ny fandeferana izay takiana amin'ny olona milaza ho kristianina. Eny, afaka miafina ao ambadiky ny hoe mba olombelona mety ho diso koa izy ireny.
Fa tsy dia io loatra no teny nolazain'i Papa Fransoa : "ho antsika rehetra, hoy izy, ho antsika tsirairay avy, dia tsara kokoa, ankehitriny, ny mandinika sao misy fiainana roa sosona ao amintsika, miseho ho marina, toa tena mpino tonga lafatra, katolika tsara kanefa ao ambany ao manao zavatra hafa". Ary notohizany fa "impiry moa isika maheno hoe raha ho katolika toa an'ireny dia aleo ihany tsy mpino."
- Toriteniny tamin'ny 23 febroary 2017 -
Ny katolika moa no voaresaka eto satria ny tenin'ny Papa no notsongaina. Fa izaho kosa, na dia nobeazina tamin'ny finoana katolika aza, na hodidinina zoky sy dadatoa sy nenitoa Mpanompon'ny Avo aza, dia isan'ny tsy mety zakan'ny resaka fivavahana. Ary arakaraky ny hitomboan'ny taonako, arakaraky ny hikasohako amin'ny fiangonana sy ny mpivavaka - tsy avahako ny finoana eto - no mainka mampanalavitra ahy amin'ilay izy. Nataoko vazivazy ihany, saingy zary tenany koa, ny hoe aleo aho hijanona ho ilay matevin-koditra hatrizay ka hatramizao fa raha mi-fôpla aho tsy entiko midina manaraka ahy ny Fiangonana sy ny Fivavahana fa mba manohy mihivingivina fotsiny ny olona miteny hoe "shhh, iny ve moa hahagaga !".
PS : efa napetrako tamin'ny namana vitsivitsy ihany ny hafatra fa apetrako ato koa hoe raha sanatria tonga ny andro ialako eto, izaho tsy entina any am-piangonana izany fa rehefa tsisy "Funérarium" azontsika hiarahana farany (toa mbola tsisy an'izany eto Roma) mba hanaovanareo ireny hira reveko be ireny amin'ny gloum - Bakomanga ao anatin'izany - dia avy dia tairo ny fanaterana ahy eny amin'ny "Crématorium" fa dorana no faniriako fa ny fasako dia any am-ponareo tsirairay avy, any amin'izay misy anareo any avy. Tsy hankanao akanjo mainty sy volondavenona fa loko marevaka daholo azafady.
[Ngonongonona ] 13 Oktobra, 2017 09:53
Misaotra ny masoivoho fa tsy ho avy hamonjy ny fihaonana amin'ny filoha aho amin'ny talata.
Matetika betsaka ny misafidy ny "Ringrazio il dottore ma rifiuto l'offerta" ao amin'ilay lalao "Affari tuoi" ao amin'ny fahitalavitra. Tsy hazavaiko ny fitsipi-dalao fa io fomba fiteny io no mba tiako ampiasaina eto, hoe "misaotra fa laviko ny tolotra".
Marina fa efa betsaka ny vazivazy - zary tenany - nifanaovana teto momba ity fiavian'ny filohampirenena ity, fa androany aho dia tena nanapa-kevitra hametraka an-taratasy fotsy ny dian-dranomainty mirakitra ny antony tsy handehanako any.
Tsy misy dikany amin'iza n'iza ny hevitro.
Tsy misy fofona politika fa zavatra tsy haiko io ka tsy hibitabitahako.
Tsy hanova n'inon'inona amin'ny fiainam-pirenena.
Tsy hanova n'inon'inona amin'ny dian'ingahy filoha sy delegasiona hanaraka azy ary tsy hanala na 0,01 € aza amin'ny tetibola natokana ho azy ity.
Tsy mahakasika ny mpiasam-panjakana ao amin'ny masoivoho ihany koa fa izy ireo tsy maintsy manao ny asa ampanaovin'ny lehibeny azy ; tsy azo atao ny miota anaty lovia hihinana.
Tsy manome tsiny loatra ireo delegasiona mafonja aho - 40 aloha no isa reko fa mety mahery be an'izay satria ny 40 dia mpandraharaha ara-toekarena hoe ; samy mba te hanao fizahantany kosa koh, miaraka amin'ny filoha ambonin'izay, mety misy ny izay vao hivoaka an'i Madagasikara.
Fa lazaiko ihany ny hevitro satria mila mandoa ny tsy zakan'ny vavoniko aho fa kapoakako io
Tsy haiko izay tena ho ataon'izany olona be dia be izany atý. Raha fiarahamiasan'ny firenena roa tonta ve dia mila vahoaka be efa ho iray fiaramanidina ? Raha hanao fanadihadiana ny fiainanay gasypora, tsy olona roa ve dia ampy ? sady afaka atao amin'ny fotoana manaraka izany. Iza koa moa ilay nilaza fa "hitokana ny masoivoho" hono rizareo ireo ?... euhhhh ka io aza efa tanin'ny firenena malagasy efa ho 50 taona na mihoatra izay koh.
Ary ilay fihaonana amin'ny talata 17 oktobra ? Efa hay fa tsy misy zava-dehibe mivaingana ho anay gasypora aty Italia ny hihaonana ao.
Raha momba ny firenena, efa renay sy hitanay amin'ny haino aman-jery sy ny tambazotra sosialy ny zavamisy. Tsy hitako izay antony mbola hanontaniana momba izany amin'ny filoha fa efa hay ny valinteny hoe "efa mandray andraikitra ny fanjakana any Madagasikara".
Raha ny momba anay atý indray, inona moa no tena horesahana aminy ? Ny resaka pasipaoro toa efa nilamina, fa na atao aza hoe mbola mikorontana dia efa hay ny valinteniny hoe "efa hodinihina ny amin'io".
Raha resaka anjara toeran'ny gasypora eo amin'ny firenena, ny zo hifidy sns, dia efa hay koa ny valinteny hoe "izay indrindra no anton'ny Forum amin'ny 26 ka hatramin'ny 28 oktobra io".
Rehefa mifanasa moa dia voninahitra no ifanomezana fa tsy izay hanina ifampizarana ao loatra akory. Ka tsy vonona hanome voninahitra ny fahamenaran'i Madagasikara aho manoloana ireto zavatra roa hitako mampitsanga-menatra ireto (ireo aloha no sendra tazan'ny masoko) :
- ny USAID nanolotra fitaovana hiadiana amin'ny pesta : JEREO ATO
- ny OMS dia nanokana vola 1 Milliard $ hanampiana antsika hiadiana amin'ny pesta, hoy ny minisitry ny fahasalamana nataon'ny RFI anterivava : HENOY ATO
Kanefa ny fanjakana mandany vola manao rodobe mankatý Roma.
Hevitro ahy irery ity, ary tsy mahakasika afa-tsy izaho dia izaho irery ihany.
* Sary : tamin'ny fandalovan'ny filoha Rajaonarimampianina teto Roma tamin'ny 2014 (efa lasa manko izy e - krkrkr - izy hivoaka ny vavahady izahay niverina nankao amin'ny efitrano fandrasaimbahiny nanapoaka ny champagne mbola tsy nisokatra)
[Ngonongonona ] 09 Aprily, 2016 12:36
Misaotra Tompo vs Ampio aho Tompo
Rediredy kely fotsiny indray androany. Tsy haiko hoe inona no tena foto-kevitra fa tiako resahana fotsiny. Tsy haiko hoe maninona koa moa no resahako zany ! .
Isika olombelona manko rehefa sendra fahasahiranana no tena voatarika hitodika amin'ny Andriamanitrany. Aleo ataoko an'izay no fiantsoana Azy satria samy manana ny Andriamanitra sy ny Zanahary tompoiny arakaraky ny finoany.
Misy zavatra ketrehako miaraka amin'ny namako izay ato. Dia hoy aho taminy hoe tsy maninona na ovaina aza zay nolazaiko fa teny afaka hakana hevitra hitondrana ilay ketrika fotsiny io nomeko io, fa tsy dia teny avy ato am-poko loatra.
Dia mandinika ny tenako tokoa aho hoe izaho tokoa toa tsy mahay mitodika amina Andriamanitra izany rehefa sahirana an. Indraindray aza aho amin'iny fotoana iny no tena devoly kely mandehandeha.... pfff, tena ondry mainty marina .
Fa rehefa misy mahafaly ahy kosa tena tadidiko Izy. Impiry aho no miteny hoe "merci Seigneur", "tena misaotra ny Tompo", "ahhh thanx God". Ary tena avy amin'ny foko izay fisaorana izay fa tsy hoe zesta teknika akory. Tsy haiko iza marina Izy fa hoy foana aho hoe matoa aho tsy sahy midegany be loatra amin'ny fiainana dia matahotra izao Andriamanitra atahoranareo izao koa.
Dia asa hoe mety ho faly amiko ve izao Andriamanitra izao raha tsy manadala azy aho amin'ny andro sarotra fa mahay mahatsiaro azy kosa amin'ny androko tsara ? Angamba miverina ihany amin'ilay ngonongonoko indray andro iry hoe "tiako raha amin'ny androm-pahasoavanao aho no tsaroanao fa tsy dia hoe ny fahorianao foana no hozarainao amiko."
Tapitra ny rediredy.
[Ngonongonona ] 23 Jiona, 2009 03:25
Valin-kafatra : hatsangako ny sainam-pireneko.
Eny iky ry Kdaomba, atsangako ny sainam-pireneko raha mbola nahazo tombon'andro aho hahafahako maneho fa Malagasy - Proudly Malagasy - avy any Madagasikara.
Io ny ahy, io no Madagasikarako na mahantra aza, na tantely afa-drakotra aza ka anjakan'ny adala, na lavitra ahy aza.
Nomen'ity firenena honenako ity ahy ny zom-pireneny ary dia natsangako "teo amin'ny antsasa-taho" tatsy amin'ny pejiko iray tatsy ny saina "maitso-fotsy-mena" italiana nanehoako fisaonana volana vitsivitsy lasa izay raha nisy horohorontany be namoizana ain'olona maro teto Italia.
Mbola mirehareha amin'ny maha-malagasy ahy tanteraka aho ka dia atsangako ny sainam-pirenena "maitso-fotsy-mena" malagasy amin'izao andro fahatsiarovana ny nahazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany izao satria aho mbola tsy very zo fa mbola malagasy 100 isanjato.
"Fa anivon'ny mamiratra, ny taniko no mamiko, tsy manam-paharoa ; hafa mbola hafa, mamy tena mbola mamy" (Jérôme Randria)
[Ngonongonona ] 17 Martsa, 2009 22:29
Dony kely aloha hakana saina fa tsss...
Haingam-pandeha ny tantaram-pirenena. Izao no vokatry ny avom-bava sy ny fikitihana vodin-tsoavaly mandeha.
Raha izay tsy nokitihana ny Injet sy ny Domapub tamin'izany noho ny tahotra hovoasongona angaha, raha navela handalo toa ny rano an-damosin'ny ganagana fotsiny ny kabarin'i Deba tao @ radio Viva (oups nizara telo io horonana io satria naharitra 20 mn, fa toa ny tapany voalohany sisa tavela ao ; izaho nihaino azy hatramin'ny farany aloha fa tsy hitako izay loza nihantona taminy e - lol) fa satria demokrasia no ampanjakaina, dia tsy izany no natao fa ny lohabe fotsiny ka tonga hatramin'ny avom-bava hoe "tsapao aloha ny hery vao mifanandrina" dia izao isika fa tonga amin'ny tsontsori-mamba isarahana.
Dia ilay iray koa moa maivan-doha be, tsy sain-jaza intsony satria efa nananika ny telopolo taona, fa hakentrenana ka izay rehetra lazaina dia natao hanafintohina fotsiny ilay mpifanandrina. Ny raharaham-pirenena angamba ataony dia mitondra masinina haingam-pandeha. Dia lohabe ihany koa no tena miady ao fa tsy misy azo raisina ny foto-kevitra ijoroan'ny lahatsoratra tolona manko e.
Dia angamba nataon'izy ireo dia INJET sy TIKO i Madagasikara ka nifampitsapan-drizareo ny heriny avy.
Dia androany dia toa tsy nisy zavatra azoko intsony fa toa komberaka be sisa no fahazoako azy : dia tena sortie honorable pour tout le monde tokoa ve dia mody nasiana sinema be (sa sinema kely). Gaga aho hoe misy garde présidentielle, ny andro antoandro be nanahary, ny fahefana feno efa nomena ny Vice amiral na dia atao aza hoe tsy an-dRamose intsony, tsisy vahoaka noahiana sao latsa-drà teo...dia mora be toa ireny ve ny nisambotra ny Vice-Amiral - le chef suprême par-dessus le marché - sy ireo jeneraly ary i dadapasy ? Nojerena ilay film ao @ france24 fa toa tsisy gidraka fa tonga dia nanaiky ireo jeneraly niakatra tanaty kamio (sa ny saiko no lasa lavitra loatra ka manana hallucination aho ?).
Amin'izay manko dia mba tsy hoe nomen'ny laitier ho an'ny Dj ny fitondrana fa mbola teny am-pelatanan'ny rasil klou, fa avy teo ny rasil no nanipy azy teny @ boay kely...Nanao pasadisy zany e (mbola manao io lalao io ve ny ankizy ankehitriny ? ilay mifanipy baolina ny samy ekipa, ka tsy mahazo alatsaka raha tsy feno folo, dia izay mahavita izany no mahazo isa - passe à 10 hozy ny ngozo)
Vizana ny saiko, aleoko asiana dzama kely, cuvée noire mihitsy aloha kah !
OK, "A mon pays !" izany e, mandra-pahatongan' izay kobonin'ny rahampitso indray fa soap opera gravy be ity. Efa hitovy halava amin'ny Beautiful.
Dia ampiako tononkalo kely fa i simp efa nanisy vazo io ambany io :
He ! ry masoandro izay osaosa taratra
Mbola aiza iky ny andro fahavaratra :
ny kotroka sy tselany,
ny rahona havelany ,
ny aizim-be hatafiny,
ny orana hafafiny,
no vao izay sahady dia sarisarin-tsaona
no isantaranay ity andro lohataona !"
Rado in-"Masoandro sasatra"
Dia ny aina no matezà aby rey olona !!!
Vive l'OLP-malagasy, miara-dia amin'i Finoanaranoray.